ရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်ချက်ကျော်လွန်ရွေ့လျားများအတွက်တတိယသော့စိတ်ကူးယန္တရားများဖြစ်ပါတယ်။ mechanisms တစ်ဦးဆေးကုသမှုတစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်စေသောဘယ်လိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသို့မဟုတ်။ ယန္တရားများရှာဖွေနေ၏ဖြစ်စဉ်ကိုလည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင် variable ကိုကွားသို့မဟုတ် variable တွေကိုဖြန်ဖြေရှာနေဟုခေါ်တွင်သည်။ စမ်းသပ်ချက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများခန့်မှန်းဘို့ကောင်းပါတယ်သော်လည်း, သူတို့သည်မကြာခဏယန္တရားများထုတ်ဖေါ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြသည်မဟုတ်။ 1) သူတို့ကပို process ကိုဒေတာစုဆောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable နှင့် 2) သူတို့အများအပြားဆက်စပ်ကုသစမ်းသပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable: ဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်စမ်းသပ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကိုနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်ယန္တရားများခွဲခြားသတ်မှတ်ကူညီပေးနိုင်သည်။
ယန္တရားများတရားဝင်သတ်မှတ်ပေးဖို့စားမှုကြောင့် (Hedström and Ylikoski 2010) ထုံးနှင့်နာ, ဝဲ: ငါရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာနဲ့စတင်ပါမယ် (Gerber and Green 2012) ။ 18 ရာစု၌ဆရာဝန်များကသင်္ဘောသား Lime ကိုစားကြ၏သောအခါနာ, ဝဲမရခဲ့ပေမယ့်တော်တော်ဥာဏ်ကောင်းသောရှိခဲ့ပါတယ်။ နာ, ဝဲနာဒါဒီအစွမ်းထက်သတင်းအချက်အလက်ခဲ့တဲ့ကြောက်မက်ဘွယ်သောရောဂါဖြစ်ပါသည်။ Lime နာ, ဝဲတားဆီးဘာကြောင့်ဒါပေမဲ့အဲဒီဆရာဝန်တွေမသိခဲ့ပါ။ ဒါဟာသိပ္ပံပညာရှင်တွေယုံကြည်စိတ်ချရသောဗီတာမင် C ကိုထုံးနာ, ဝဲတားဆီးသောအကြောင်းပြချက်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွနိုငျသောနီးပါးနှစ်ပေါင်း 200 အကြာမှာ 1932 သည်အထိမဟုတ်ခဲ့ (Carpenter 1988, p 191) ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဗီတာမင် C ကို Lime နာ, ဝဲနာ (ပုံ 4.9) တားဆီးရာမှတဆင့်ယန္တရားဖြစ်ပါတယ်။ ၏သင်တန်း, ယန္တရားဖော်ထုတ်သိပ္ပံပညာ၏သိပ္ပံနည်းကျ-စာရေးတံအမှုအရာဖြစ်ပျက်အဘယ်ကြောင့်ဥာဏ်ကိုအကြောင်းပါအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ယန္တရားများဖော်ထုတ်ခြင်းလက်တွေ့ကျကျအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ တစ်ဦးဆေးကုသမှုအလုပ်လုပ်တယ်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်နားလည်ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့အလားအလာပင်ပိုကောင်းအလုပ်လုပ်သောသစ်ကိုကုသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ပါသည်။
ပုံ 4.9: Lime နာ, ဝဲတားဆီးများနှင့်ယန္တရားဗီတာမင်စီဖြစ်ပါတယ်
ကံမကောင်းစွာပဲ, ယန္တရားများသီးခြားအလွန်ခက်ခဲသည်။ Lime နှင့်နာ, ဝဲနာနှင့်မတူဘဲ, များစွာသောလူမှုရေး setting တွင်, ကုသဖြစ်နိုင်ယန္တရားများ၏အထီးကျန်အလွန်အမင်းခက်ခဲစေသည်သောများစွာသောအပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောလမ်းကြောင်းမှတဆင့်လုပ်ကိုင်။ သို့သော်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, သုတေသီများ process ကိုဒေတာစုဆောင်းနှင့်ဆက်စပ်ကုသစမ်းသပ်နေဖြင့်ယန္တယားခွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။
ဖြစ်နိုင်သမျှယန္တရားများကိုစမ်းသပ်ဖို့တလမ်းတည်းဖြင့်ကုသမှုဖြစ်နိုင်သောယန္တရားများထိခိုက်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဒေတာစုဆောင်းဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိုမှတ်မိ Allcott (2011) မူလစာမျက်နှာစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအစီရင်ခံစာများလူတို့သည်မိမိတို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချစေသည်ဟုပြသသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုကဤအစီရင်ခံစာများလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချသလဲ? ထိုယန္တယားအဘယျသို့ရှိသနည်း တစ်ဦးမှာအောက်ပါအတိုင်း-up ကလေ့လာမှုမှာ, Allcott and Rogers (2014) တစ်ဦးကိုပြန်အစီအစဉ်မှတဆင့်, စားသုံးသူပိုပြီးစွမ်းအင်ကိုအကျိုးရှိစွာမော်ဒယ်များသူတို့ရဲ့ကရိယာအဆင့်မြှင့်သောသတင်းအချက်အလက်များရယူခဲ့ကြောင်း, ထိုအာဏာကုမ္ပဏီနှင့်အတူပူးပေါင်း။ Allcott and Rogers (2014) ကအနည်းငယ်ပိုမိုတွေ့ရှိရ ပြည်ထဲရေးစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအစီရင်ခံစာများကိုလက်ခံရရှိလူတို့သည်မိမိတို့ကရိယာအဆင့်မြှင့်။ ဒါပေမယ့်ဒီခြားနားချက်ကကုသအိမ်ထောင်စုစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုအတွက်ကျဆင်းခြင်း၏ 2% သာအကောင့်နိုင်အောင်သေးငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့်ပစ္စည်းအဆင့်မြှင့်ပြည်ထဲရေးစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအစီရင်ခံစာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုလျော့ကျရာမှတဆင့်ကြီးစိုးယန္တရားကြဘူး။
ယန္တရားများလေ့လာဖို့တစ်ဦးကဒုတိယလမ်းကုသမှု၏အနည်းငယ်ကွဲပြားဗားရှင်းများနှင့်စမ်းသပ်ချက်ကို run ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ၏စမ်းသပ်မှုအတွက် Schultz et al. (2007) နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်နောက်ဆက်တွဲမူလစာမျက်နှာစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအစီရင်ခံစာစမ်းသပ်ချက်, သင်တန်းသားများနှစ်ခုအဓိကအစိတ်အပိုင်းများစွမ်းအင်ကိုချွေတာနဲ့သူတို့ရဲ့သက်တူရွယ်တူသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးဆွေမျိုး (ပုံ 4.6) အကြောင်းကို 2) သတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. 1) အကြံပေးချက်များရှိပါတယ်တဲ့ကုသမှုကိုပေးခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကစွမ်းအင်ကိုချွေတာအကြံပေးချက်များအပြောင်းအလဲကို, မသက်တူရွယ်တူသတင်းအချက်အလက်စေသောဘာတွေလုပ်နေလဲကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တယောက်တည်းအအကြံပေးချက်များလုံလောက်သောခဲ့ကြအံ့သောငှါဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကဲဖြတ်ဖို့, Ferraro, Miranda, and Price (2011) အတ္တလန်တာ, ဂျော်ဂျီယာအနီးရှိရေကုမ္ပဏီနှင့်အတူပူးပေါင်းနှင့် ပတ်သက်. 100,000 အိမ်ထောင်စုနှငျ့ပတျသကျသောရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအပေါ်တစ်ဦးဆက်စပ်စမ်းသပ်မှုသို့ပွေးလေ၏။ လေးခွအေနမြေားရှိခဲ့သည်:
ရေ + ရေကယ်ဖို့တစ်ဦးကငျြ့ဝတျအယူခံချွေအပေါ်အကြံပေးချက်များခံသောအုပ်စုတစု။
ရေ + သူတို့၏ရွယ်တူချင်းရန်သူတို့၏ရေအသုံးပြုမှုဆွေမျိုးအကြောင်းရေ + သတင်းအချက်အလက်ကိုကယ်တင်မယ့်ကိုယ်ကျင့်တရားအယူခံချွေအပေါ်အကြံပေးချက်များခံသောအုပ်စုတစု။
အဆိုပါသုတေသီများအကြံပေးချက်များသာကုသရေတို (တနှစ်), အလယ်အလတ် (နှစ်ဦးနှစ်) ၌ရေသုံးစွဲမှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့များနှင့်ကြာမြင့်စွာ (သုံးနှစ်တွင်) သက်တမ်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအကြံပေးချက်များ + ကုသမှုအယူခံသင်တန်းသားများကိုရေအသုံးပြုမှုလျော့ကျစေပေမယ့်မှသာရေတိုရေရှည်၌တည်၏။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အအကြံပေးချက်များ + သက်တူရွယ်တူသတင်းအချက်အလက်ကုသမှုစေသောအယူခံရေတို, အလတ်နှင့်ရေရှည် (ပုံ 4.10) တွင်အသုံးပြုမှုယုတ်လျော့လေ၏။ unbundled ကုသမှုနှင့်အတူစမ်းသပ်ချက်ဤမျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောသူမြားကိုအတူတူ-များမှာကုသမှု-သို့မဟုတ်သောအစိတ်အပိုင်းများသောအစိတ်အပိုင်းထဲကအတွက်ကောင်းတစ်လမ်းရှိပါတယ် (Gerber and Green 2012, Sec. 10.6) ။ ဥပမာအားဖြင့်, Ferraro နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏စမ်းသပ်မှုတယောက်တည်းရေချွေတာအကြံပေးချက်များရေအသုံးပြုမှုကိုလျော့ချဖို့လုံလောက်တဲ့မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြသသည်။
ပုံ 4.10: ကနေရလာဒ် Ferraro, Miranda, and Price (2011) ။ ကုသမေလ 21, 2007 စေလွှတ်ခဲ့သည်နှင့်သက်ရောက်မှုများသုတေသီများယန္တရားများ၏ပိုကောင်းတဲ့သဘောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မျှော်လင့်ကုသမှု unbundling အားဖြင့် 2007 ခုနှစ်, 2008 နဲ့ 2009 ခုနှစ်ရဲ့နွေရာသီကာလအတွင်းတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအကြံပေးချက်များသာကုသမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဘယ်သူမျှမတို (တနှစ်), အလယ်အလတ် (နှစျနှစျ) တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ကြာမြင့်စွာ (သုံးနှစ်) သက်တမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအကြံပေးချက်များ + ကုသမှုအယူခံသင်တန်းသားများကိုရေအသုံးပြုမှုလျော့ကျစေပေမယ့်မှသာရေတိုရေရှည်၌တည်၏။ အကြံဉာဏ် + အယူခံ + သက်တူရွယ်တူသတင်းအချက်အလက်ကုသရေတို, အလတ်နှင့်ရေရှည်၌ရေသုံးစွဲမှုလျော့ချရန်သင်တန်းသားများစေ၏။ ဒေါင်လိုက်ဘားခန့်မှန်းခြေယုံကြည်စိတ်ချမှုကြားကာလဖြစ်ကြသည်။ ကြည့်ရှုပါ Bernedo, Ferraro, and Price (2014) အမှန်တကယ်လေ့လာမှုပစ္စည်းများသည်။
အကောင်းဆုံးကတော့, တစျစိတျအပိုငျးမြား၏ layer ကို ကျော်လွန်. (အကြံပေးချက်များ; အကြံပေးချက်များ + အယူခံ; အကြံပေးချက်များ + သက်တူရွယ်တူသတင်းအချက်အလက်အယူခံ) ရွှေ့မယ်လို့အပြည့်အဝ factorial ဒီဇိုင်း-လည်းတခါတရံ \_ (2 ^ ဋ \_) factorial ဒီဇိုင်း-ရှိရာ၏အသီးအသီးဖြစ်နိုင်ချေပေါင်းစပ်လို့ချေါဖို့ သုံးဒြပ်စင် (ဇယား 4.1) စမျးသပျဖြစ်ပါတယ်။ အစိတ်အပိုင်းများကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဖြစ်နိုင်တဲ့ပေါင်းစပ်စမ်းသပ်အသုံးပြုပုံသုတေသီများအပြည့်အဝအထီးကျန်မှုတွေနှင့်ပေါင်းစပ်စီအစိတ်အပိုင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Ferraro နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏စမ်းသပ်မှုတယောက်တည်းသက်တူရွယ်တူနှိုင်းယှဉ်လျှင်အပြုအမူအတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေရန်လုံလောက်သောခဲ့ကြပေသည်ရှိမရှိထုတ်ဖေါ်မထားဘူး။ သူတို့သင်တန်းသားများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်လိုအပ်သူတို့ကအတိအကျကုသမှု၏ကြီးမားသောအရေအတွက်နဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့မကယ်မလွှတ်ချနိုင်မှသုတေသီများလိုအပ်ကြောင့်အတိတ်ထဲမှာ, အဲဒီအပြည့်အဝ factorial ဒီဇိုင်းများကို run ရန်ခက်ခဲကြပြီ။ သို့သော်ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်အချို့သောအခြေအနေများတွင်ဤထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးန့်အသတ်ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
စားပွဲတင် 4.1: အကြံပေးချက်များ, အယူခံဝင်ခြင်း, သက်တူရွယ်တူသတင်းအချက်အလက်:3element တွေနှင့်အတူအပြည့်အဝ factorial ဒီဇိုင်းအတွက်ကုသမှု၏ဥပမာ။ ၏အမှန်တကယ်ဒီဇိုင်း Ferraro, Miranda, and Price (2011) သုံးကုသထည့်သွင်းတဲ့အနု factorial ဒီဇိုင်းခဲ့: အကြံပေးချက်များ; အကြံပေးချက်များ + အယူခံ; နှင့်အကြံပေးချက်များ + သက်တူရွယ်တူသတင်းအချက်အလက် (ပုံ 4.10) အယူခံ။
5 အကြံပေးချက်များ + အယူခံ
6 အကြံပေးချက်များ + သက်တူရွယ်တူသတင်းအချက်အလက်များ
8 အကြံပေးချက်များ + အယူခံ + သက်တူရွယ်တူသတင်းအချက်အလက်များ
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ယန္တရားများ-The တစ်ဦးဆေးကုသမှုတစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှု-တွေဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးသောသည့်တဆင့်လမ်းကြောင်း။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်စမ်းသပ်ချက် process ကိုဒေတာစုဆောင်းနှင့် 2) အပြည့်အဝ factorial ဒီဇိုင်းများအားဖွင့်) သုတေသီများ 1 ယန္တရားများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကူညီပေးနိုင်သည်။ ဤအချည်းကပ်ခြင်းဖြင့်အကြံပြုအဆိုပါယန္တရားများထို့နောက်သဖြင့်အထူးသဖြင့်စမ်းသပ်ယန္တရားများဖို့ဒီဇိုင်းစမ်းသပ်ချက်များကတိုက်ရိုက်စမျးသပျနိုငျသညျ (Ludwig, Kling, and Mullainathan 2011; Imai, Tingley, and Yamamoto 2013; Pirlott and MacKinnon 2016) ။
စုစုပေါင်းခုနှစ်, ဤသုံးပါးသဘောတရားများ-သက်တမ်း; ကုသသက်ရောက်မှုများ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော; နှင့်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူခြင်းဘို့အိုင်ဒီယာတစ်ခုအစွမ်းထက် set ကိုယန္တရားများ-ပေး။ ဤရွေ့ကားသဘောတရားများကိုသုတေသီများအဘယ်မှာရှိသနည်းအဘယ်ကြောင့်ကုသအလုပ်လုပ်ထုတ်ဖေါ်ကြောင်းသီအိုရီမှတင်းကျပ်တဲ့လင့်များရှိသည်သောချမ်းသာစမ်းသပ်ချက်, ရန် "အလုပ်ဖြစ်တယ်" ဘာအကြောင်းရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်ချက် ကျော်လွန်. ရွှေ့ကူညီဖို့, ပင်သုတေသီများပိုပြီးထိရောက်သောကုသမှုဒီဇိုင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်။ စမ်းသပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအယူအဆရေးရာနောက်ခံပေးထား, ငါသည်ယခုသင်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့စမ်းသပ်ချက်ဖြစ်ပျက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်မှဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။